အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ညစ်ညမ်းသောလျှို့ဝှက်ချက် | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 8, 2007 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 4, 2013 Douglas Karr
Email Industry တွင်ညစ်ပတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်ရှိသည်။ အခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမပြောတဲ့ဆင်ပဲ။ ဘယ်သူမှ နိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Inbox ကိုရဲ ၀ န်ထမ်းများထံမှရဲများကလက်စားချေမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်၎င်းကိုပြောဆိုပါ။
ဒါအမှန်ပဲ။ သင်ဒီမှာကြား၏ ငါထပ်ခါတလဲလဲပြောမယ် ...
ဒါပေမယ့် Doug ... မင်းဘာပြောနေတာလဲ ဒါကြောက်စရာပဲ! ဒါကတစ်ခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရာကိုဖီဆန်။ ဒါဟာဘာကိုမဆို ISP များ ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ ဒါဟာဘာကိုမဆို ESPs များ ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ SPAM နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသည့်အရာများကိုပင်ငြင်းဆန်သည်။
အမှန်တရားမှာစပမ်းဖြစ်သည် မဟုတ် မလိုလားသောအီးမေးလ် စပမ်းသည် မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပေးပို့ကြောင်းအီးမေးလ်။ ဘာ SPAM လဲ is is မလိုချင်ဘူး အီးမေးလ် အလိုမရှိ။
ဒီကနေ့ GOODMSG လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ရအရင်းအမြစ်တစ်ခုကနေအီးမေးလ်တခုကိုကျွန်တော်စာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။ ငါသူတို့ကိုငါ့ပေး အခွင့် ကျွန်တော့်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အီးမေးလ်တွေမကြာခဏပို့ပေးတယ်၊ သူတို့ကိုကောင်းကောင်းပုံနှိပ်ခွင့်တောင်ပေးတယ်၊ သူတို့ကသူတို့နဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကိုယ်စားကမ်းလှမ်းတယ်။
GOODMSG သည်ပြောင်းပြန် DNS ရှာဖွေမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
GOODMSG သည်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတိုင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းထားသောစာရင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
GOODMSG သည် ISP များနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန် Deliverability Consultants ကိုတိုးချဲ့သည်။
ငါ6ရပြီးနောက် လများ GOODMSG သည်ခြေဆွံ့သောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုပေးပို့သောအခါအီးမေးလ်၏၊ ကျွန်ုပ်၏ ISP ၏ Junk Email ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အခြားစာရင်းပေးသွင်းသူများသည်လည်းအလားတူလုပ်ဆောင်ကြသည်။
နာမည်ကြီးသောကြော်ငြာရှင် GOODMSG သည်စပမ်မာဖြစ်လာသည်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုအခြေခံပြီး၊ double-optin၊ CAN-SPAM လိုက်နာရန်၊ 1-click unsubscribe …အရာအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာပြုသည်။ ယခုတွင်သူတို့သည် SPAMMER ဖြစ်သည်။
စပမ်မာအနေနှင့်၎င်းတို့သည်နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည်။ သူတို့၏ IP လိပ်စာကိုယခုပိတ်ဆို့ထားသည်။ သူတို့ရဲ့အခြားဖောက်သည်သူ အလိုရှိ အီးမေးလ်ကမရဘူး သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာယိုယွင်းနေတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့အသစ်တစ်ခုကို ESP ပြောင်းပါ။ သူတို့သည် IP လိပ်စာအသစ်သို့ပြောင်းကောင်းပြောင်းလိမ့်မည်။ သူတို့ကတစ်ခုခုလုပ်ရမယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်က Inbox ထဲကိုဝင်လို့မရဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကသွားပါ။ သူတို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုလား။ တစ် ဦး ကအားနည်း, မလိုချင်တဲ့, မက်ဆေ့ခ်ျကို။
ဒါကိုဘယ်သူကအပြစ်တင်ရမလဲ။ Goodmsg? စာရင်းသွင်းသူ?
ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲ Internet Service Provider ဆိုတာအထူးသဖြင့်သော့ချက်အီးမေးလ်အေးဂျင့်ပေးသော ISPs - Yahoo !, Google, Live (Hotmail, MSN), AOL ။ ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်မှန်တဲ့စပမ်းကနေအကာအကွယ်မပေးနိုင်လို့သူတို့အပြစ်တင်ရမယ်။ သူတို့ဟာချို့ယွင်းချက်ရှိသောဂုဏ်သတင်းစနစ်များကိုအသုံးပြုပါတယ်။ အချက်အလက်တွေမဝေငှကြပါဘူး။ စည်းမျဉ်းများကိုမလိုက်နာသော၊ ဂုဏ်သတင်းကိုဂရုမစိုက်၊ ခွင့်ပြုချက်ကိုဂရုမစိုက်၊ IP လိပ်စာများကိုလည်ပတ်ပြီးစစ်ဆေးမှုများနှင့်အငြင်းပွားမှုများကိုကျော်လွှားသောစစ်မှန်သောစပမ်မားများမှပေးပို့သောသန်းနှင့်ချီသောအီးမေးလ်များကိုသူတို့လျစ်လျူရှုကြသည် နာမည်ကြီးစျေးကွက်အသုံးချ။
၎င်းသည်ဒေသခံအထက်တန်းကျောင်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့်လက္ခဏာများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ မူးယစ်ကင်းစင်သူများသာမူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သူများဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူများသည်လမ်းဘေးလမ်းများနှင့်စင်္ကြံလမ်းများကိုလျှောက်လှမ်းနေစဉ်တွင်သူတို့ဖြတ်သွားသည့်လက္ခဏာများကိုရယ်မောနေကြသည်။
ငါခွင့်ပြုချက်အကြောင်းအစောပိုင်းကပြောခဲ့တယ် ခွင့်ပြုချက်ပြproblemနာမှာ ISPs သည်သင်ခွင့်ပြုချက်ပေးသည့်စနစ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ESP များသည်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်သည် စွန့်စားမှု ညံ့ဖျင်းသောပေးပို့ခြင်းနှင့်အမှိုက်အီးမေးလ်အစီရင်ခံ၏။ သို့သော် ISP နှင့် ESP သည်ခွင့်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်တော့မှမျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အဘယ်ကြောင့်စတင်မေးမြန်းရန်လိုအပ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က 'ကောင်းသော' အီးမေးလ်များမရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒုက္ခရောက်နေချိန်တွင်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသောသန်းနှင့်ချီသောစပမ်းစာများကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်သည် ISP များသည်ခွင့်ပြုချက်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ ခွင့်ပြုချက်ရယူသည်။ သူတို့ကခွင့်ပြုချက်ကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး။ သူတို့ကအဲ့ဒီအီးမေးလ်ခလုတ်ကိုဘယ်နှစ်ယောက်နှိပ်သလဲဆိုတာကိုသာဂရုစိုက်ကြတယ်။ ဒါသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်အားလုံးပါပဲ။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်၏သုံးစွဲသူများအားအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျမပို့ဘဲသတိထားပါ။ သင့်အားပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် SPAMMER တံဆိပ်ကပ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။
စစ်မှန်သော SPAM ကိုတိုက်ထုတ်ရန် ISP များဘာလုပ်သင့်သလဲ
အီးမေးလ်အားတာဝန်ရှိစွာပေးပို့လိုသောမည်သည့်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသို့မဟုတ်ကြော်ငြာရှင်အတွက်မဆို Opt-In APIs များကိုပေးပါ။
တာ ၀ န်ရှိသည့်စျေးကွက်သမားများအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းမရှိစေရန် Opt-In အချက်အလက်များကိုအခြား ISP များနှင့်မျှဝေပါ။
အီးမေးလ်ပို့ရန် ISP များကိုအသုံးပြုခြင်းမှစပမ်မ်များကိုတားဆီးပါ။ မင်းသိလား ယူနိုက်တက်စတိတ်သည်အဆိုးဆုံးစပမ်းပါ? သင်ကကလေးများအားညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံရိုက်သူကိုနာရီနှင့်ချီ။ ရှာနိုင်သည်ကိုသင်အမှန်တကယ်ပြောနေသလား၊ သို့သော်စပမ်မားများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဟာ့ဒ်ဝဲဟာဒီမယုံနိုင်လောက်တဲ့အသွားအလာပမာဏကိုမမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာလား။
ကျွန်တော့်ကိုကားပေါ်မှာလူတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ဆောင်ခွင့်ပေးရင်မင်းထောင်ကျလိမ့်မယ်။ SPAM များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်သော ISP များသည်မည်သို့တာဝန်ခံ။ မရသနည်း။
အီးမေးလ်များကို ၀ င်ရောက်ရန် (GARANTEED) ပေးပို့ခြင်းအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုပေးပါ။ Email သည်ဒုတိယဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းမဟုတ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ inbox ထဲတွင်အကြွေးသတိပေးချက်များနှင့်ဘဏ်သတိပေးချက်များရရှိသည်။ ဤအီးမေးလ်များသည် Junk Email ဖိုင်တွဲတစ်ခုအတွင်းသို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်မှာမသေချာပေ။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့ရန် UPS, FedEx နှင့် USPS တို့သည်သင်၏ဂိုဒေါင်ကိုပြခြင်းမပြုတော့ပါကသင်သူတို့အားတရားစွဲလိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမကြာခဏဆိုသလို ISP ကိုတရားစွဲဆိုမှာပါ။ သူကခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးစည်းမျဉ်းတိုင်းကိုလိုက်နာသောအီးမေးလ်ကိုမပို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှုပ်ထွေးစေသောဤရှုပ်ထွေးမှုအတွက်တာ ၀ န်ယူရန်လိုအပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်ရန်ငြင်းဆန်သည်။
Tags: ပို့ဆောင်ရေးအီးမေးပို့နိုင်မှုESPisp ပါjunk အီးမေးလ်junk အီးမေးလ်စစ်ထုတ်ခြင်းစပမ်း
ဘလော့ဂ်ပို့စ်နံပါတ် ၁၀၀၀ - Techpoint မှနိုးပါ။
9:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 12
9:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 02
သဘောတူတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖန်တီးသူ အီးမေးလ်တွေ အားလုံးလိုလိုပါပဲ။ Argghh!
နိုဝင်ဘာလ9ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 1:39 နာရီ
ယင်းက Silverpop CEO မှ "ခွင့်ပြုချက်" ကို "မျှော်လင့်ချက်" ဖြင့် အစားထိုးသင့်ပုံအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို အမှတ်ရစေသည်။
11:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 43
ပို့စ်ကောင်း၊ မင်းရဲ့အမှတ် နံပါတ် ၄ က ချောတဲ့လမ်းကို ဦးတည်နေတယ်လို့ ငါထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ISPS သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များပေးပို့သည့်အရာအတွက် တာဝန်ရှိလာပါက၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ပိုမိုရှေးရိုးဆန်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဒါမှမဟုတ် တစ်နည်းပြောရရင် စာတိုက်ဗုံးတွေအတွက် စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုကို အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။ ဟက်ကာတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏လက်ပ်တော့ပ်ကို ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သည့်အခါ Dell ကို ထောင်ချလိုပါသလား။ ဆဲလ်ဖုန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုအတွက် AT&T က တာဝန်ယူသင့်ပါသလား။ ရှင်းရှင်းလေး မဟုတ်ဘူး။ သယ်ဆောင်သည့်အရာများအတွက် သယ်ဆောင်သူက တာဝန်မယူသင့်ပါ။ ပေးပို့သူဖြစ်ပါ သည်။
လုပ်ငန်းများသည် ဆုံးရှုံးသွားသော ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက် လူသိများသော spammer များကို ငွေတောင်းခံနိုင်လျှင် စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ မှန်ကန်သော၊ အားကောင်းသော (နှင့်- ပြဌာန်းထားသော) ဥပဒေများဖြင့်၊ Spam သည် အတိတ်ဖြစ်သင့်သည်။
11:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 14
ဒါ အရမ်းကောင်းတဲ့ အချက်ပါ၊ modifoo ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ကို သက်သေပြရမယ့် အရာဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။ ISP တစ်ခုရှိရင် သိထား ၎င်းတို့သည် spamming ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် bandwidth ကိုရောင်းချခဲ့သည်၊ ၎င်းတို့သည်တာဝန်ခံသင့်သည်။
မတ်လ 12, 2011 မှာ 4: 04 pm တွင်
ဤဘလော့ဂ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်ကဲ့သို့ သဘောထားများသည် ISP များရဲ အီးမေးလ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အကြောင်းရင်း အတိအကျဖြစ်သည်- မတောင်းဆိုထားသော မေးလ်များ ပေးပို့သူများသည် ၎င်းတို့အမှားအယွင်းမရှိဟု ယုံကြည်ခြင်းအတွက် လောဘလွန်ကဲစွာ မျက်ကွယ်ပြုကြသည်။ သင့်အတွက် သတင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်၊ ကျပ်မပြည့်ပါ - spam ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် *အရာအားလုံး* ရှိသည်။ သင်ကဲ့သို့လူများသည် ISP များသည် သင့်အား ပိတ်ဆို့ရန် ပျော်ရွှင်လွန်းပြီး နွားများအိမ်မပြန်မချင်း ခက်ခဲစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် သင့်အား ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းကို သင်နားလည်မည်မဟုတ်ပါ။
မတ်လ 12, 2011 မှာ 4: 14 pm တွင်
ရေချယ်၊ သင်သည် ပို့စ်တစ်ခုလုံးကို ကျော်သွားရပါမည်။ ကျပ်မပြည့်တဲ့အပိုင်းကလွဲရင် ကျွန်တော့်ရဲ့အချက်က မင်းက ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဆောင်းပါး တစ်ခုလုံးကို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ပါ။
မေလ 22, 2016 မှာ 3: 25 AM
ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဆောင်းပါး။ အခု ၉ နှစ်လောက်ကြာတော့ အခြေအနေက ပိုဆိုးတယ်။ ကျွန်တော်မြင်နေရသလိုပဲ Google လိုမျိုး ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်တာ၊ ပြောတာ၊ တွေးတာတွေ ပိုများလာတယ်။ ဤသည်မှာ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် သပ်ရပ်သောအစွန်းအထင်းဖြစ်ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားတွေးခေါ်မှုကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ဝါဒဖြန့်မှုအားလုံးကို မျိုချမိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရိတ်စက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွေးမွေးလိုသော "အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်" အစိုးရများကို ၎င်းတို့၏ စီမံခန့်ခွဲသူများအဖြစ် အသုံးပြု၍ လိမ်ညာထားသည်။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပြီး ဒီအကြောင်း ဆွေးနွေးတာ နည်းနည်းလေး ကြားလိုက်ရတာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ အများစု - သိုးများသည် အရာအားလုံးကို လက်ခံပုံရပြီး ကမ္ဘာ့ Google များကို ဘုရားသခင်အဖြစ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကိုးကွယ်ကြသည်။ သေချာတာကတော့ ဒီကနေ ကောင်းကျိုးတွေ မလာဘူး။ အဆိုပါတရားဝင်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် - နှင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာ (ဆိုလိုသည်မှာအကျိုးရှိသော၊ အကျိုးပြုသောနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်သောအကြောင်းအရာ) ကိုလိုချင်သောကြောင့်သူတို့ထံစာရင်းသွင်းထားသူများကံကောင်းပါစေ။ မင်းရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပျက်တော့မယ်။ ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ amorphouse ကော်ပိုရိတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သည် သင့်အား မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ အခွင့်အာဏာမပေးစေလိုပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် သင့်မေးလ်များကို ဖတ်ရုံသာမက၊ ၎င်းတို့ကို ပေးပို့ခြင်းမှ ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည် - စကားလုံး၏ အမှန်ကန်ဆုံးသဘောဖြင့် မေးလ်လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ပေးပို့ခြင်းမပြုသော အီးမေးလ်တိုင်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်ပြီး ၎င်းတွင် ဒေါ်လာတန်ဖိုးတစ်ခု ထားရှိသင့်သည် ဥပမာ- ဆုံးရှုံးသွားသော လုပ်ငန်းဝင်ငွေ/တန်ဖိုးအတွက် အီးမေးလ်တစ်စောင်လျှင် $1 နှင့် ပေးပို့ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အတန်းအစားတွင် တရားစွဲသင့်ပါသည်။ အဲဒါက သူတို့ကို အထင်ကြီးစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် တရားဝင်အီးမေးလ် 10,000,000 ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ နေ့စဉ် မပို့ဆောင်ပါက အရေးဆိုမှု ထပ်တိုးလာမည်လား။